Nahoana no Tsy Mitovy ny Tetirazan’i Jesosy Nosoratan’i Matio sy Lioka?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Tsy mitovy ny zavatra notantarain’i Matio sy Lioka momba ny nahaterahan’i Jesosy sy ny fiainany tamin’izy mbola zaza. Samy nanana ny zavatra nifantohany mantsy izy ireo.
I Josefa no tena noresahin’i Matio ao amin’ny Filazantsarany. Voalaza ao, ohatra, ny nataon’i Josefa rehefa fantany fa bevohoka i Maria. Noresahiny ao koa fa nohazavain’ny anjely iray tamin’i Josefa izay nitranga tamin’i Maria, ary nanaraka ny tenin’ilay anjely izy taorian’izay. (Mat. 1:19-25) Voalaza ao koa ireto: Nisy anjely nilaza tamin’i Josefa hoe mila mandositra any Ejipta ry zareo, dia nankany izy sy ny vady aman-janany. Nisy anjely nampirisika azy hiverina tany amin’ny tanin’ny Israely indray avy eo, dia nody tany Israely ry zareo ary nanapa-kevitra izy hoe any Nazareta izy mianakavy no hipetraka. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Imbalo miverina ny anaran’i Josefa, ao amin’ny toko roa voalohany ao amin’ny Filazantsaran’i Matio. Ny an’i Maria kosa indimy.
I Maria indray no tena voaresaka ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka. Hita ao, ohatra, ireto: Ny anjely Gabriela nitsidika an’i Maria, i Maria nitsidika an’i Elizabeta havany, ary ny tenin’i Maria tamin’izy nidera an’i Jehovah. (Lioka 1:26-56) Hita ao koa ny tenin’i Simeona tamin’i Maria, tamin’izy nilaza hoe hijaly i Jesosy. Tantaraina ao ny dian-dry Maria nankany amin’ny tempoly tamin’i Jesosy 12 taona, ary ny tenin’i Maria fa tsy ny an’i Josefa no naveriny ao. Nilaza koa i Lioka fa nisy vokany be tamin’i Maria ireo zava-nitranga rehetra ireo. (Lioka 2:19, 34, 35, 48, 51) In-13 miverina ny anaran’i Maria, ao amin’ny toko roa voalohany ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka. Ny an’i Josefa kosa in-3 monja. Ny zavatra niainan’i Maria sy ny fihetseham-pony àry no tena noresahin’i Lioka. I Matio kosa niresaka an’izay nampiady saina an’i Josefa sy izay nataony.
Ahitana ny tetirazan’i Jesosy koa ireo Filazantsara roa ireo, saingy tsy mitovy ilay izy. Ny razamben’i Josefa no noresahin’i Matio mba hampisehoana fa raha araka ny lalàna, dia manan-jo handova ny fanjakan’i Davida i Jesosy. Taranak’i Solomona zanak’i Davida Mpanjaka mantsy i Josefa, ary zanaka natsangany i Jesosy. (Mat. 1:6, 16) Ny razamben’i Maria kosa no noresahin’i Lioka. Asehony hoe tena mpandova an’i Davida Mpanjaka i Jesosy “raha araka ny nofo.” (Rom. 1:3) Taranak’i Natana zanak’i Davida Mpanjaka mantsy i Maria. (Lioka 3:31) Nahoana anefa i Lioka no nilaza fa “zanak’i Hely” i Josefa, nefa i Maria no tena zanany? Satria ny anaran’ny lehilahy matetika no noresahina rehefa nanao tetirazana. Te hilaza àry i Lioka hoe vinantolahin’i Hely i Josefa.—Lioka 3:23.
Porofoin’ny tetirazana nataon’i Matio sy Lioka fa i Jesosy ilay Mesia nampanantenain’Andriamanitra. Be dia be ny olona nahafantatra an’ilay tetirazan’i Jesosy. Na ny Fariseo sy ny Sadoseo aza niaiky hoe marina ilay izy. Mbola manampy antsika hanam-pinoana ireo tetirazana ireo hatramin’izao, ary manampy antsika hatoky hoe ho tanteraka daholo izay nampanantenain’Andriamanitra.
Fanontanian’ny Mpamaky—Aogositra 2017
Fantatrao Ve?—Ny Tilikambo Fiambenana No. 3 2016